Banyere Anyị - Changlin Industrials Co., Ltd.
Changlin Industrials Co., Ltd. Njikọ guzosie ike na 2017, na-emekwa ụfọdụ ihe n'ichepụta akpa, ịsa akpa, ụlọ mposi, akpa onyinye, nkwakọ akpa, nkwado akpa, ịzụ ahịa akpa, osimiri akpa wdg Changlin bụ alaka osisi nke Jiafeng Plastic Products CO., LTD mgbe Jiafeng nwere ihe 20 afọ 'ahụmahụ nke ịchọ mma akpa Ndinam.
Changlin ekpuchi karịrị 17000 square mita 'ụlọ ebe na nwere ọtụtụ elu oru na akụrụngwa, a otu nke ahụmahụ na-emepụta na n'elu 150 nkà ọrụ. Anyị nwere abụọ isi mmepụta edoghi: kpachie akpa akara na Okpomọkụ akara akpa akara. Anyị kwa ọnwa ike nke akpa bụ 1 nde nkeji, ha na-exported na Europe, north America, South America, Australian, Asia pacific, na Middle East ……
Site na mmụọ nke "nraranye, ihe ọhụrụ, imekọ ihe ọnụ, ịrụsi ọrụ ike" na ụdị ọrụ nke ịbụ "ezigbo, ọrụ iwu, nkwukọrịta, pụtara ìhè", ndị ọrụ niile na-enye ndị ahịa ochie na ndị ahịa kacha mma ngwaahịa na ọrụ. Dabere na ahụmịhe zuru oke anyị nwere karịa afọ 20 na ịgbado ọkụ na ntanetị, anyị agafeela asambodo nke ISO9001, nweta akụkọ nyocha nke SA8000, SEDEX, L'Oréal, LVMH, ma anyị na-etolite ọnụ na ọtụtụ nnukwu ụdị. , dị ka n'okpuru: L'OREAL （Gụnyere ma ọnweghị oke na YSL, HR, LANCOME, VICHY, LA ROCHE-POSAY, Kiehl's)，LVMH （Gụnyere mana ọnweghị oke na BVLGARI, Givenchy ， GUERLAIN, SEPHORA, Uru） UR BURBERRY 、 ESTEE LAUDER (Gụnyere ma ọ bụghị nanị LA MER, Jo Malone London, CLINIQUE, Bobbi Brown, MAC) 、 SISLEY 、 L'OCCITANE 、 UNILEVER 、 P & G 、 ISDIN 、 NUXE 、 LACOSTE, na wdg.
N'ihe banyere mmepe na-adigide, ugbu a, ejirila ọtụtụ ihe eji eme enyi na gburugburu ebe a: Organic or natural Cotton and linen are anywhere anywhere, RPET Material is on the way ， while Recycled EVA or Recycled TPU will be ohuru ohuru. A na-azụlite ihe ndị na-emepụta ihe ọkụkụ dị ka osisi painiapulu na akwa banana ma tinye ha n'ọrụ. Changlin na-agbasi mbọ ike imepụta ngwaahịa nchekwa gburugburu ebe obibi, yana inye ike anyị maka nchekwa gburugburu ụwa.
Nye anyị gị imewe, anyị na-eme ya!
Anyị na-emesi gị obi ike na Changlin ga-abụ otu n'ime ndị mmekọ ntụkwasị obi gị na ndị ahịa ị ga-azụ!
Ọ bụ ọchịchọ anyị na-enye gị nke kacha mma ngwaahịa na magburu onwe ọrụ, na anyị factory ji obi ụtọ na-anabata OEM / ODM.
anyị agafeela nyocha nke L'Oréal, LVMH, SEDEX 4, nwere asambodo nke ISO9001 na SA8000.